एक अनुकूलित मामला काम को प्रक्रिया के हो?
पोस्ट समय: May-27-2017
जहाँ हामी मा आउन एक विचार जीवन ल्याउन एक बिट भारी हुन सक्छ, र thats। हाम्रो प्रक्रिया डिजाइन साथ सुरु हुन्छ। 15 भन्दा बढी संयुक्त अनुभव वर्ष हामीले एक वास्तविकता मा कुनै पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनुभवी डिजाइन टोली लागि विशिष्ट आवश्यक कुनै पनि आवेदन आवश्यकता पूरा गर्न एक पूर्ण अनुकूलन मामला डिजाइन हुनेछ ...Read more »
के तपाईं एक ढाला ईवा प्रकरण प्रयोग गर्न प्राप्त लाभ?
तपाईं नाजुक उपकरण वा सुरक्षा चाहिन्छ भनेर संवेदनशील साधन छ भने, एक thermoformed ईवा मामला एक आदर्श समाधान छ। यसलाई गरेको स्थायित्व र rigidity कारण, ईवा अवस्थामा यो सुरक्षा गुण हो त्यागी बिना, हार्ड प्लास्टिक अवस्थामा एक सिद्ध वैकल्पिक प्रस्ताव। हाम्रो स्वामित्व चीरना ...Read more »
परे प्रकरण आफ्नो गुणस्तर नियन्त्रण प्रक्रिया कसरी?
हामी हाम्रो ग्राहकहरु देखि एक 100% सन्तुष्टि दर्जा आफूलाई गर्व। हाम्रो impeccable गुणस्तर नियन्त्रण स्तर अनुकूलन मामला डिजाइन र उत्पादन मा एक उद्योग नेता हाम्रो प्रतिष्ठा एउटा प्रमुख योगदानकर्ता छन्। हामी तपाईंलाई दोष-मुक्त आदेश किनमेल गर्न पूर्णतया प्रतिबद्ध छन्। वास्तवमा, हामी एक defe पाउन भने ...Read more »
प्रकरण बाहिर लागि अनुकूलित ईवा प्रकरण सबैभन्दा विश्वसनीय साझेदार हो
तपाईं एक कठिन समय फेला ईवा (Ethylene vinyl एसीटेट) उत्पादन भइरहेको गरिएको छ भने, आफ्नो जीवन अझ सजिलो भयो। मा परे प्रकरण, तपाईं अनुकूलित अवस्थामा उत्पादनहरु को सबै भित्र र हाम्रो अनुकूलन OEM अवस्थामा धेरै यो उल्लेखनीय सामाग्री पाउनुहुन्छ। , ताजा चिकना र यसको नरम बनावट संग स्टाइलिश, greate ...Read more »